Iyaqina eyokugcotshwa kweMbube uMisuzulu - Ilanga News
Home Izindaba Iyaqina eyokugcotshwa kweMbube uMisuzulu
Iyaqina eyokugcotshwa kweMbube uMisuzulu
UNyazi lubusise isibaya sezinkomo ‘okuyinkomba yokusondela kosuku olukhulu’
INKOSI yamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe (okwesobunxele), ubusise isibaya sezinkomo okuthiwa yinkomba esobala yokuthi sekusondele ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini (okwesokudla). Lokhu kwenzeke izolo ngeSonto ngaphambi kokuqala koMgidi waleli bandla elenze inkonzo yomkhuleko ngoMgqibelo KwaKhangelamankengane, KwaNongoma. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
UKUBONAKALA kweSilo uMisuzulu kaZwelithini sikhombisa iNkosi yamaNazaretha aseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, isibaya sezinkomo ngoMgqibelo esigodlweni saKwaKhangelamankengane ngesikhathi kunenkonzo enkulu yamaNazaretha, kuqinise izinsolo zokuthi sezihubela sakusha ngokugcotshwa kwaso ngokusemthethweni.
Asabalalise okomlilo wequbula ezinkundleni zokuxhumana amahlebezi okuthi sekuseduze ukuba iSilo uMisuzulu sibekwe esihlalweni emcimbini wesintu. Kuzokhumbuleka ukuthi kunombango oqhubekayo eNdlunkulu kaZulu njengoba ihlukene phakathi ngokumele aqhwakele kulesi sikhundla esavuleka emuva kokukhothama kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu ngoNdasa (March) nonyaka.
Emuva kokukhothama kweSilo uZwelithini, kwabamba uMntanenkosi, iNdlovukazi Mantfombi ongunina weSilo uMisuzulu, kulandelelwa umyalelo wencwadi yefa okuthiwa yabhalwa yiMbube (iSilo uZwelithini) nokho ephonselwe inselelo ngundlunkulu wokuqala, uSibongile Winifred uMaDlamini namadodakazi akhe.
Udaba luseNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu kanti kulindeleke ukuba lungene ngasekuqaleni kukaZibandlela (December) nonyaka. Lolu daba lwangena ingakakhothami iNdlovukazi uMantfombi, eyashiya incwadi eyaphakamisa ngayo iSilo uMisuzulu ukuba
asithathe lesi sihlalo uma singenankinga, kodwa nxa singathandi, kuyomele abantwana besisu sayo bakhethe ngokuyimfihlo abambona simfanele. ISilo uMisuzulu sakwamukela ukuphakanyiswa.
Kuqhubeka umdonsiswano nje, naso iSilo uMisuzulu siyaqhubeka nemisebenzi yokuhola isizwe njengoba siyenzile nemikhosi emqoka yaKwaZulu kubalwa uMkhosi Womhlanga, oweLembe, yile nkonzo yoMgidi yamaNazaretha njengoba kuseza noMkhosi woKweshwama. Yonke yenzeka ngaphandle koxhaso lukahulumeni njengoba usalinde ukuba kuphele icala.
Ukuphonselwa inselelo kokuphakanyiswa kweSilo uMisuzulu ngabanye abantwana, kuholele ekutheni uhulumeni kazwelonke ujube ithimba eliholwa nguMnu Willies Mchunu ukuba luyicubungule indaba yasendlunkulu, bese lenza izincomo ngokumele kwenzeke.
ILANGA libuza iSilo uMisuzulu ukuthi bekumayelana nani ukukhombisa kwaso uNyazi isibaya sezinkomo, sithe: “Besenzela ukuthi ubaba (uNyazi) asibone isibaya, bese esibusisa.”
Sibuzwa ukuthi lokhu ngabe kuhambelana namahlebezi athi uma sekuphele isibaya iSilo sizogcotshwa yini, sithe: “Mhlawumbe nalokho kuyaxhumana.” Sibuzwa ukuthi sekungabikwa njengokuyiqiniso yini ukuthi amalungiselelo okugcoba iSilo aseyaphothulwa, sithe: “Okwamanje ngicabanga kanjalo.”
Izolo ngeSonto bekugoqwa inkonzo eqale ngoMgqibelo lapho bekunezintshumayelo khona, amaNazaretha edlubhe umfaniswano waleli bandla omhlophe, kwehluke ngokwezigaba njengoba abanye befake oluhlaza (ovame ukugqokwa ngabavangeli). Le nkonzo izolo iphethe ngomgido, kuqhudelana ngokwahlukana inhlalisuthi, ingudlungudlu nezintombi.
UMnu Lizwi Ncwane okhulumela amaNazaretha aseBuhleni, uthe bajabule kakhulu ngendlela inkonzo eqhubeke ngayo. NoMntwana uThulani Zulu uhambe emazwini kaMnu Ncwane. Uthe uNyazi lufike nezinkomo eziwu-11, ezintathu zahlatshwa zadliwa, iSilo sakhipha ezine. Naye utuse ubuhle benkonzo. Wale waphetha ukukhuluma ngendaba yokugcotshwa kweSilo, wathi basazohlangana bewumndeni baxoxe besebazisa umphakathi ngokuqhubekayo.
Le nkonzo kuthiwa iqhubeke yize bekunabathile abebefuna ingenzeki njengoba kusenombango ngobuholi bamaNazaretha eBuhleni othinta uNyazi, nokho abeluleki beSilo uMisuzulu kuthiwa bathe akunankinga ukufika kwanoma ngabe yiluphi uhlangothi ngoba iMbube iwuyise wawo wonke amaZulu, kungakhathalekile ukuthi akuliphi ibandla nokuthi abhekene naziphi izinkinga empilweni.
Previous articleUMNDENI UTAKULWE NGU-PRINCIPAL WAKHELWA UMUZI
Next articleUyamaniswa neChiefs uVilakazi weDowns